ကင်ဆာဆဲလ်ကို သေစေနိုင်သည်ဟုဆိုသော စေတီခရေုခါ် မရွတ်ကောင် - Latest Myanmar News
ကင်ဆာဆဲလ်ကို သေစေနိုင်သည်ဟုဆိုသော စေတီခရေုခါ် မရွတ်ကောင်
ကင်ဆာဆဲလ် ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးပေးသော ရခိုင်အခေါ် မရွတ်
မနီလာ- ဒေသခံများက ဘာဂုံ ဂုံ(bagongon)အဖြစ် လူသိများသည့် ရခိုင်အခေါ် မရွတ်
(ဗမာအခေါ် စေတီခရု)၏ အ သားသည် ကင်ဆာဆဲလ်ပြန့် ပွားမှုကို ထိရောက်စွာ တား ဆီးနိုင်ကြောင်း မနီလာမြို့ ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်မှကျောင်း သားများ၏ သုတေသနပြုချက်အရ သိရှိသည်။
ဖီလစ်ပိုင်လူမျိုးများက ဟင်းလျှာအဖြစ် စားသုံးကြသည့်ခရုမျိုးနွယ်ဝင် စေတီခရုသည် သွေးကြောအတွင်း ကင်ဆာဆဲလ်ဖြစ်ပွားစေမှုကို တားဆီးပေးသည်ဟုသိရသည်။
သွေးကြော၏ ကြီးထွားမှုကိုတားဆီးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များသည် အဟာရငတ်ပြတ်ကာ ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်သွားစေသည်။
စေတီခရုစားသုံးခြင်း၏ အစွမ်းသတ္တိကြောင့်ကင်ဆာတိုက်ဖျက်သည့် ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ကျူးမား(ခ)အဖုအကျိတ်အတွင်းရှိ ကင်ဆာဆဲလ်ကို တိုက်ရိုက် သတ်ခြင်းထက်ထိ ရောက်မှုရှိသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်အခေါ် မရွတ်၏ အ စွမ်းသတ္တိကို တစ်ခြမ်းဖွင့်ထားသော ဘဲဥသားပေါက်၏ သွေးကြောကြီးထွားမှုဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ကင်ဆာ ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကို ဖြစ်စေသောသွေးကြောများ၏ အရွယ်အစားနှင့် အရှည်ကို သိ သိသာသာ လျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရ၏
သွေးကြော သစ်ကြီးထွားမှုကို လျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ် ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးခဲ့သည်ဟုသုတေသနအကယ်ဒမီမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မှတ်ချက်။ Facebookမိတ် ဆွေ Aye Thein Maung ၏မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုစား၍မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုပေးလိုက်ပါသည်။
ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများဖြစ်၍ ကျွမ်းကျင်သူများက ဖြည့်စွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါ၏။
ရခိုင်လူမျိုးများ ကင်ဆာရောဂါပျောက်ကင်းအောင် မရွတ်များများ စားပေးကြပါရန်အကြံပြုပါ၏။
Horn snail may prevent spread of cancer cells, claims UP study (ABS-CBN News)
MANILA – Extracts fromahorn snail locally known as bagongon were found to be possibly effective in preventing the spread of cancer cells byagroup of University of the Philippines Manila students.
Telescopium telescopium, used to prepare Ilonggo dish ginataang bagongon, may inhibit angiogenesis or the formation of blood vessels from pre-existing ones, according to the study of UP Manila pharmacy students.
Inhibiting the blood vessels’ growth would starve the cancer cells and stop its growth.
“Restriction of the tumor growth by Telescopium telescopium maybe due to the antiangiogenic activity of the compound rather than direct tumor cell killing ability,” the study read.
The horn snail’s antiangiogenic activity was tested usingapartially opened fertilized duck egg where the growth of the blood vessels was observed.
“Based on the results, after treatment withacertain concentration of Telescopium telescopium extract, blood vessel size and length were reduced atasignificant level.
Growth of new blood vessels was inhibited, thus also inhibiting angiogenesis,” according to the abstract of the study from UP’s Office of the Vice President for Academic Affairs.
ကငျဆာဆဲလျ ပွနျ့ပှားမှုကို တားဆီးပေးသော ရခိုငျအချေါ မရှတျ
မနီလာ- ဒသေခံမြားက ဘာဂုံ ဂုံ(bagongon)အဖွဈ လူသိမြားသညျ့ ရခိုငျအချေါ မရှတျ
(ဗမာအချေါ စတေီခရု)၏ အ သားသညျ ကငျဆာဆဲလျပွနျ့ ပှားမှုကို ထိရောကျစှာ တား ဆီးနိုငျကွောငျး မနီလာမွို့ ဖိလဈပိုငျတက်ကသိုလျမှကြောငျး သားမြား၏ သုတသေနပွုခကျြအရ သိရှိသညျ။
ဖီလဈပိုငျလူမြိုးမြားက ဟငျးလြှာအဖွဈ စားသုံးကွသညျ့ခရုမြိုးနှယျဝငျ စတေီခရုသညျ သှေးကွောအတှငျး ကငျဆာဆဲလျဖွဈပှားစမှေုကို တားဆီးပေးသညျဟုသိရသညျ။
သှေးကွော၏ ကွီးထှားမှုကိုတားဆီးခွငျးဖွငျ့ ကငျဆာဆဲလျမြားသညျ အဟာရငတျပွတျကာ ကွီးထှားမှုကို ရပျတနျ့သှားစသေညျ။
စတေီခရုစားသုံးခွငျး၏ အစှမျးသတ်တိကွောငျ့ကငျဆာတိုကျဖကျြသညျ့ ဒွပျပေါငျးအဖွဈပွောငျးလဲသှားပွီး ကြူးမား(ခ)အဖုအကြိတျအတှငျးရှိ ကငျဆာဆဲလျကို တိုကျရိုကျ သတျခွငျးထကျထိ ရောကျမှုရှိသညျဟု သိရသညျ။
ရခိုငျအချေါ မရှတျ၏ အ စှမျးသတ်တိကို တဈခွမျးဖှငျ့ထားသော ဘဲဥသားပေါကျ၏ သှေးကွောကွီးထှားမှုဖွငျ့စမျးသပျခဲ့ရာ ကငျဆာ ဆဲလျကွီးထှားမှုကို ဖွဈစသေောသှေးကွောမြား၏ အရှယျအစားနှငျ့ အရှညျကို သိ သိသာသာ လြော့နညျးစကွေောငျးတှရေ့၏
သှေးကွော သဈကွီးထှားမှုကို လြော့နညျးစခွေငျးဖွငျ့ ကငျဆာဆဲလျ ပွနျ့ပှားမှုကို တားဆီးခဲ့သညျဟုသုတသေနအကယျဒမီမှ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
မှတျခကျြ။ Facebookမိတျ ဆှေ Aye Thein Maung ၏မတ်ေတာရပျခံခကျြအရ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုစား၍မွနျမာဘာသာ ပွနျဆိုပေးလိုကျပါသညျ။
ဆေးပညာဆိုငျရာ ဝေါဟာရမြားဖွဈ၍ ကြှမျးကငျြသူမြားက ဖွညျ့စှကျပေးကွပါရနျ မတ်ေတာရပျခံပါ၏။
ရခိုငျလူမြိုးမြား ကငျဆာရောဂါပြောကျကငျးအောငျ မရှတျမြားမြား စားပေးကွပါရနျအကွံပွုပါ၏။
အဆိုးတစ်ခု ကြုံရတိုင်း ကောင်းတာ တစ်ခု ထလုပ်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များအားလုံး မီးပြတ်မည့် အချိန်များ